Koronaavaayirasi: Saayintistoonni dhibee Covid-19tiif qoricha argachuuf hangam abdii qabu? - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayirasi: Saayintistoonni dhibee Covid-19tiif qoricha argachuuf hangam abdii qabu?
Haaromsameera 27 Bitooteessa 2020
Yaaliin saayintistoonni talaallii ykn qoricha koronaavaayirasiif argachuuf taasisaa jiran maal fakkaata laata?
Koronaavaayirasiin addunyaarratti babal'ataa jiraatulleen hanga ammaatti garuu qorichis ta'e talaalliin dhibee kanaaf argame hin jiru.
Kanaafuu, qoricha lubbuu baraaruudhaaf oolu argachuuf maaltu hojjatamaa jiraa laata? gaaffiin jedhan irra deddeebiin ka'uu dhaga'amaa jira.
Vaayirasichaaf qoricha argachuuf ammoo qorannoon saffiisaan gaggeefamaa jira. Talaalliiwwan gara 20 ta'an adeemsa irra jiru.
Talaalliiin tokkoos akkataa kanaan dura barameen alatti osoo bineensota/lubbu qabeeyyii irratti hin yaalamiin dura kallattiin namootarratti yaalameera.
Saayintistoonni kaan ammoo bineensoota irratti yaalaa kan jiran yoo ta'u, dhuma bara kanaarraatti namoota irratti ni yaalama abdii jedhu qabu.
Dhugaatti fixaan baheef saayintistoonni dhuma bara kanaatti talaalli hojjachuu yoo danda'an illeen talaalichi addunyaa hundaaf kan gahu ta'ee addunyaa gahamaa kan jedhuuf hojiin ni hafa.
Kana jechuunis, yoo xinnaate wallakkaa bara dhufuutti talaallii guutummaatti qaqabuu dhiisuu mala jechuudha.
Haata'u malee, wanti hunduu saffiisaan raawwataa jiru. Saffisa kana keessatti wanat akkamiitu mudachuu akka danda'amu hin beekamu.
Tibba kanattis namoota qabaa kan jiru gosa koronaavaayirasii afuriidha. Hundinuu qufaa nama qabsiisu. Kanaaf ammoo talaalliin qophaa'e omtu hin jiru.
Talaalichi namota umurii hundaaf kennamuu danda'aa?
Qorichi kunneenis maangodoottarratti hangas mara bu'a qabeessa ta'uu dhiisu mala. Kunis dadhabina talaalichaa osoo hin taane, dandeettii namoonni umuriidhaan turan dhukkuba dandamachuuf qaban irraa kan ka'u ta'uu isaatiin.
Kun ammoo baroota dheeraaf kan weerara dhukkuba garaa garaa irratti yaalamee mirkanneefameedha.
Qorichi dhiibbaa qabaachu malaa?
Qorichoonni dhukkubbii hir'isanii kaasee hundinu dhiibbaa ni qabaatu. Haata'u malee, qorichoonni amma hojjatamaa jiraatan kunneen dhiibbaa attamii qabaachuu akka danda'an ilaalchisee kan mirkanneessuun danda'amu yaalii wallaansaatiin. Kun ammoo hordoffii cimaa dhimma barbaaduudha.
Talaalicha argachu kan qabu eenyu?
Talaalichi erga argameen boodas tamsaasuun isaa baayyee kan murtaa'e ta'a. Isaan boodas erga bu'aansaa barameen booda eenyuuf dursi akka kennamuuf ni murtaa'aa. Oggeessoonni fayyaa COVID-19 dursaan irratti qabsaa'aa jiran dura fayyadamo akka ta'an eegama.
Talaallichi namoota gurguddoo irratti akka hojjatu erga mirkanaa'een booda ammoo maanguddoonni isaan dursi kennamuuf keessa ta'u.
Akkasumas namoonni warra maanguddoo kunuunsan dursi ni kennamaaf jechuudha.
Haalli qorichaa maal fakkaata?
Haakimoonnis farra vaayirasii kanaa hojjataa kan jiran yoo ta'u, isaanis vaayirasii irratti kan hojjatu ta'usaas yaalaa jiru.
Biyyoota vaayirasiin miidhaa olaanaa irraan gahee keessattis baatii Guraandhalaa keessa yaaliin taasifamee ture. Haata'u male, hojjetaa Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa kan ta'an Dr Biruus Ayiwaald ''wayita ammaatti haala gaarii ni hojjata jennee kan yaadnu qoricha tokkicha qofaadha,'' jechuun isaanii ni yaadatama.
Qorichi kunis Iboolaaf jedhamee kan qophaa'e ture yoo ta'u, vaayirasoota hedduu ajjeessuu kan danda'u ta'uun mirkanaa'eera. Haata'u malee, fixaan bahiinsa koronaavaayirasii fayyisuu irratti qabu bu'aansaa egamaa jira.
Qorichoota HIV lama (Lopiinavar fi riitonaaviir) irrattis abdii olaanaan eegamee ture. Haata'u malee, yaaliin wallaansa isaa kan abdii kutachisu ture.
Qorichoonni kunneenis namoota dhukkubbiin koronaavaayirasii itti cimee fooyyaassuus ta'e du'a oolchu hin dandeenye. Erga namootaaf kennameen boodas hojjachuu kan eegalu baayyee tureeti.
Akkasumas, dhukkuba busaa irratti hojjachuuf fedhii guddaatu jira.
Yaalii laaboraatoriitti taasifameenis qorichichi sirriin kan hojjatu ta'unsaa haalaan mirkannaa'ulleen dhukkubsattoota irratti ammoo yaalamuun bu'aansaa ammallee hin barmne. Yaaliin kunis Ameerikaafi biyyoota biraattis gaggeefamaa jira.
Kanaafuu talaallii ykn qorichi hanga argamuutti maal haa raawwannu?
Yeroo ammaatti malli gaariin koronaavaayirasii ittisuuf jiru harka sirriitti dhiiqachuudha. Tokkicha dhukkubichaan qabamnaan ammoo, dhukkubichi namoota baayyee irratti waan hin cimneefu nama keessatti boqachuun paaraasitaamoolii fudhachuun, dhagala'aa hedduu dhuguu ofi wallaanuun ni danda'ama.
Namoonni tokko tokkoos dhukkuba biraa qabaachuu waan malaniif isaan hospitaala galuun yaalamuu qabaatu.
Tamsaasa kallattii guyyaa har'aa
'Sodaafi shakkii uummamef dhiifama gaafanna'
Koongoon sodaa koronaavaayirasiif karra magaalaa guddoo ishii cufatte
Manaa hojjechuun akkamiin koronaavaayirasii ittisuuf gargaara?
Paartiin Badhaadhinaa dhiifama gaafate
Hindiin lammiileeshee biliyoona 1.3 akka manaa hin baane dhorkite
Hojjeettonni mootummaa federaalaa manaa akka hojjetan murtaa'e
Koronaavaayirasii: Sababa Covid-19 qajeelfama labsame jalaa ba'uudhaaf cidha ariifachiisaa gaggeeffame
Koronaavaayirasii: Itoophiyaan sodaa dhibee Covid-19'n manneen sirreessaa federaalaati hidhamtoota 4,000 hiikuufi
Guyyaa tokkotti Ameerikaatti namoonni 10,000 caalaa Covid-19'n qabamani
Daqiiqaa 47 dura